Ilitye lekristale yentsingiselo eluhlaza. Uhlobo lwe-quartz eguqukayo
Inkonzo yokuvavanywa kwelitye kwi-Intanethi
Ziziphi iimpawu zamagugu ezixabisekileyo nezisisigxina?
Unokulinganisela njani ixabiso lelitye?
Ngaba ukuphilisa amakristal ngokwenene usebenza?
Ngaba iimpawu zamaminerali?
Ziziphi iimpawu zamatye ezibonakalayo?
Akunakunqunyulwa ngokuthenga ilitye?
Nguwuphi umhloli weritye?
Ziziphi iimpawu zokuzalwa?
Ithetha ntoni ubucwebe beplatinam eKhambodiya?
Yintoni i-Mina Reap?
tags aventurine, aventurine eluhlaza
Ilitye lekristale yentsingiselo eluhlaza.
Thenga i-aventurine yendalo kwivenkile yethu
Uhlobo lwe-quartz, olubonakaliswa kukungaguquguquki kwayo kunye nobukho beplatyeral inclusions ezibandakanya ukubengezela okanye ukubengezela okubizwa ngokuba yi-aventurescence.
Owona mbala uqhelekileyo uluhlaza, kodwa isenokuba yiorenji, emdaka, tyheli, blue, okanye grey. I-fuchsite ethwele i-Chrome (iindidi ezahlukeneyo ze-muscovite mica) kukubandakanywa kweklasikhi kwaye kunika isilu eluhlaza okanye eluhlaza okwesibhakabhaka. Ii-orenji kunye nee-browns zibangelwa yi-hematite okanye i-goethite.
Kuba lilitye, iipropathi zalo ezibonakalayo ziyahluka: ubunzima bayo bunokulala phakathi kwe-2.64-2.69 kwaye ubunzima bayo buphantsi kancinci kune-quartz enye ye-crystal malunga ne-6.5.
I-Aventurine feldspar okanye ilitye lelanga linokudideka ne-quartzite e-orenji kunye nebomvu, nangona eyokuqala ihlala ibonakala gwenxa. Iliwa lihlala liboshwe kwaye ukugcwala kwe-fuchsite kunokubangela ukuba i-opaque, kwimeko apho inokuthi iphazanyiswe yi-malachite xa uyijonga kuqala.
Igama elithi aventurine livela kwi-Italiya "i-ventura" ethetha "ngengozi." Le yinto ebhekisele ekufumaneni ngethamsanqa iglasi okanye ilitye legolide kwindawo ethile ngenkulungwane ye-18. Elinye ibali libaleka ukuba olu hlobo lweglasi lwalwenziwe ngengozi eMurano ngumntu owayesebenza, owathi wavumela ezinye iifilitha zobhedu ukuba ziwele "kwisinyithi" esinyibilikisiweyo, apho imveliso yabizwa ngokuba yi-avventurino. Ukusuka kwiglasi kaMurano igama lidluliselwe kwizimbiwa, ezibonisa inkangeleko efanayo. Nangona yayisaziwa kuqala, ilitye legolide ngoku lixelisa ngokufanayo i-aventurine kunye nelitye lelanga. IGoldstone yahlulwe ngokubonakalayo kwezi zimbiwa zimbini zokugqibela ziintsimbi zayo zobhedu, ezazisasazeke ngaphakathi kweglasi ngendlela efanayo. Ihlala imdaka ngegolide, kodwa ikwafumaneka ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye oluhlaza.
Uninzi loburhabaxa obuluhlaza kunye nobuluhlaza-luhlaza luvela e-India, ngakumbi kwindawo ekufuphi nase Mysore nase Chennai, apho iqeshwe khona ngamagcisa. Izinto ezimhlophe ezimhlophe, ezingwevu kunye neorenji zifumaneka eChile, eSpain naseRussia. Uninzi lwezinto ezibonakalayo zenziwe ubuhlalu kunye neesimboli ezinemizekelo emihle kuphela eyenziwe kwiicabochons, kamva isetelwe kubucwebe.
Intsingiselo yeAventurine yekristale kunye neepropathi zokuphilisa
Eli candelo lilandelayo lisekwe ngokwesayensi kwaye lisekwe kwinkolelo yenkcubeko.
Intsingiselo yelitye eliluhlaza elilitye elityebileyo. Yomeleza iimpawu zobunkokeli kunye nokuthatha isigqibo. Ukukhuthaza uvelwano novelwano. Ikhuthaza ukunyamezela. Ilitye liphelisa ukungcangcazela kunye ne-neuroses ebukhali. Izinzisa imeko yengqondo yomntu, ivuselele ukuqonda kwaye inyuse ubuchule bokuyila. Uncedo ekuboneni ezinye iindlela kunye namathuba. Kuthoba umsindo kunye nokucaphuka. Ukukhuthaza iimvakalelo zokuphila kakuhle. I-crystal balances energy male-female energy. Ikhuthaza ukuvuselelwa kwentliziyo. Ikhusela ngokuchasene nongcoliseko lokusingqongileyo.
IAventurine phantsi kwemicroscope
Yintoni elungileyo ye-aventurine?
Ilinganisa uxinzelelo lwegazi kwaye ivuselele imetabolism, yehlise icholesterol. I-crystal ine-anti-inflammatory effect kwaye iyanciphisa ukuqhuma kwesikhumba, i-allergies, i-migraines kunye nokuhlaziya amehlo. Iphilisa imiphunga, isono, intliziyo, imisipha kunye neenkqubo zesisu.
Yintoni intsingiselo yokomoya ye-aventurine eluhlaza?
Ilitye le-aventurine eluhlaza okhupha intsingiselo yakudala, imikhwa kunye nokudana ukuze ukukhula okutsha kwenzeke. Izisa ithemba kunye nomdla wobomi, uvumela umntu ukuba aqhubele phambili ngokuzithemba kwaye amkele utshintsho. Ikhulisa ubuchule kunye nenkuthazo yomntu, kwaye ikhuthaza ukuzingisa ekuqhubeni imiqobo yobomi.
Ubeka phi ilitye lomoya?
Beka iliwa eliluhlaza eliluhlaza empuma okanye empuma mpuma yegumbi okanye ikhaya ngobuninzi, amandla kunye nokukhula okunempilo. Igumbi lomntwana, igumbi lokutyela, ikhitshi okanye indawo apho iprojekthi entsha sele iza kuqala khona inokuphuculwa ngelitye.
Ifuzisela ntoni iaventurine?
Intsingiselo yekristale yeAventurine. Eyaziwa njengelitye lokuchuma, impumelelo, ubuninzi kunye nenhlanhla, ukuthwala isiqwenga sekristal epokothweni yakho, isipaji, okanye kwisibingelelo sakho kuya kuhamba ithamsanqa kuwe. Olona hlobo luqhelekileyo lwekristale luhlaza, olususela kumbala omdaka ukuya kumbala oluhlaza, kwaye xa likhazimlisiwe, linokudideka ngokulula nejade eluhlaza.
Ngaba unxiba i-aventurine eluhlaza yonke imihla?
I-aventurine eluhlaza lilitye elonyusa amajoni empilo yentliziyo kunye nokuphilisa, amandla kunye nobuninzi. Yigqoke yonke imihla ukunceda ukulinganisa i-chakra yentliziyo.
Yeyiphi chakra yi-aventurine eluhlaza?
Idityaniswe kwi-chakra yentliziyo, i-aventurine eluhlaza ivula iintliziyo zethu ukuba zithande ngokukhupha imiqobo yeemvakalelo kunye neepateni zokucinga ezingalunganga ezithintele intliziyo ekuphiliseni nasekuthinteleni amandla ethu okuthemba uthando.
Unxiba njani iAventurine?
Kuyacetyiswa ukuba unxibe i-aventurine eluhlaza kufutshane nentliziyo yakho, okanye kwiindawo zokubetha. I-aventurine eluhlaza okwesibhakabhaka kufuneka ibekwe kwi-chakra yesithathu-iliso ukunceda ukuphilisa, okanye phantsi komqamelo xa ulele.
Ungayifaka i-aventurine emanzini?
Njengekristale ekhuselekileyo ikhuselekile emanzini. Njengoko i-crystal quartz, neametiste, quartz etshaya, i quartz, isibulali, i-quartz yekhephu, ngeerubhi, okanye neyaspisi.
Yintoni etsala i-aventurine eluhlaza?
Lelinye lamatye enkulumbuso ukutsala ithamsanqa, ubuninzi kunye nempumelelo. Ilitye linamandla athambileyo emva kwalo, kwaye liyacetyiswa ukuba lisebenze ngemicimbi yeemvakalelo engasonjululwanga.
Ngowuphi umhla endifanele ndinxibe aventurine eluhlaza?
Nabani na onokuthi anxibe isongo esiluhlaza se-aventurine kwimpumelelo iyonke. Inika iziphumo ezilungileyo kubantu abane-Mercury ebuthathaka kwi-horoscope. Abantu abazalwe ngomhla we-5, we-14 nowama-23 kuyo nayiphi na inyanga baya kuyinxiba.
Uyikhathalela njani i-aventurine eluhlaza?
I-crystal inokuphela ngokukhawuleza ixesha elide elangeni, ngoko gcina iigugu kwindawo emnyama. Ikwajongana nobushushu obugqithisileyo, ke gcina eli litye lisisiqhushumbisi semoto yakho ehlotyeni okanye ebusika. Qiniseka ukuba ucoca eli litye linqabileyo emanzini ashushu anesepha kunye nelaphu elithambileyo okanye ibrashi.
Thenga i-aventurine yendalo kwivenkile yethu yegugu
Senza ubucwebe besiko le-aventurine eluhlaza njengamakhonkco okuzibandakanya, izacholo zomqala, amacici e-stud, izacholo, namacici… Nceda Qhagamshelana nathi ngesicatshulwa.
Amanqaku afana nawo
tags aventurine, iglasi, ilitye legolide
Ilitye eliluhlaza okwesibhakabhaka
tags aventurine, Feldspar, Sunstone
Iimpawu ezintsha ezikhoyo
Ndwendwela ivenkile yethu
Ikhaya | Amatye okuzalwa | Qhagamshelana nathi
I-GEMIC Co., Ltd. / i-GEMIC Laboratory Co., Ltd. © Copyright 2014-2021, Gem.Iziqinisekiso
imposiso: Umxholo likhuselwe !!